सिथी नखः पर्व- नेतृत्वको मुहान कसले सफा गर्ने ? | Nagarik News - Nepal Republic Media
सिथी नखः पर्व- नेतृत्वको मुहान कसले सफा गर्ने ?
२ असार २०७८ ३ मिनेट पाठ
आज सिथी नखः पर्व। जेष्ठ शुक्ल षष्ठीका दिन पानीको शुद्धताको लागि मुहानको सरसफाइ गरिने दिन हो। संग्लो पानीको लागि पानीको मुहान सफाइ गरिँदै गर्दा वर्षाैदेखि धमिलिएको मुलुकको नेतृत्वको सरसफाइमा भने कसैको ध्यान गएको छैन्।
गंगोत्रीमै फोहोर भयो भने गंगा कसरी सफा रहन्छ भन्ने भनाइ चर्चित छ। नेतृत्व धमिलो हँुदा तलतिरका कार्यकर्ता मैला हुन्छन् र अनुशासनहीनता सुरु हुन्छ भन्ने कुरा पनि नेताहरुले राम्ररी बुझेका छन्। त्यसैले त तेस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेता माधवकुमार नेपालप्रति इंगित गर्दै ‘नेतृत्व नै धमिलो भएपछि कार्यकर्तामा त्यसमा प्रभाव पर्नु स्वभाविक’ भएको व्यंग्यसमेत गरेका थिए।
शासकको आँखाबाट हेर्दा उनले माधव नेपाल धमिलो भएको देखे त्यति बेला। तर जनताको आँखाबाट हेर्दा नेपालमात्र हैन, उनी लगायतका थुप्रै नेतृत्व धमिलो भएको प्रष्ट हुन्छ। दशकौंदेखि पार्टीको नेतृत्वमा एकक्षत्र राज गरेका उनीहरु युवाहरु बुढा हुँदा पनि आफूलाई युवा नेता भन्न छुटाएका छैनन्।
मुहानको यो धमिलो नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जनमोर्चा , नेमकिपा, जसपालगायत सबै पार्टीमा रहेको छ। तर नेतृत्वको मुहान सफा गर्ने आँट कसैले गर्न सकेको छैन।
आजको दिन इनार, कुवा अनि पोखरी वरिपरि पूजा गर्ने अनि त्यहाँ फोहोर नगर्न धार्मिक अनि सांस्कृतिक हिसाबले बाध्यकारी हुने संस्कार प्रशंसनीय छ।तर हाम्रो नेतृत्वको सफाइको लागि सबै कहिल्यै एकजुट हुन सकेनन्। उनीहरु सफाइको कुरा त गर्छन् तर गर्दागर्दै समय बितेको पत्तो हुँदैन। कार्यकर्ताको बिचलन सफाइको मुख्य बाधक हुन पुग्यो।
वातावरण, पर्यावरण अनि जीवन–शैलीको अनुपम सम्मिश्रण यस चाडले सदियौँदेखि हामीलाई पानी अनि मुहानको सरसफाइको पाठ सिकाइरहेको छ। सरसफाइ गरिसकेपछि केही दिनका लागि पानीका मुहान प्रयोग गरिन्न। मुहान नचलाएपछि पानी स्थिर हुन्छ।
यता हाम्रो नेतृत्व कहिल्यै स्थिर हुन पाएन। स्थिर होला होला जस्तो देखिन्छ, फेरि आफ्नै कारण या अरुको कारणले यो धमिलिन्छ। धमिलो पानीमा माछा मार्ने देशी विदेशी शक्ति हावी हुन्छ।
पानी सफा गर्दा इनार, पोखरी अनि कुँवामा पसेर नै सफा गरिन्छ। यसो गर्नाले पानीका तलका सतह जस्तै हिलो, लेदोलगायत जमेका फोहोर पदार्थहरू माथि आउने हुन्छ। सके त हाम्रो नेतृत्वले पनि आफ्नै मनभित्र छिरेर त्यहाँ भएर फोहोरहरु सफा गरे हुने नी। तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन्।
खाली जमिन कम हुँदै गएको सहर यति बेला घरै–घरले भरिँदै गएका छन्। जसका कारण वर्षायाममा जतिसुकै धेरै पानी परेता पनि वरपर सिमेन्टका भुई भएका कारण परेका पानी मुहानले सोस्न सकेको छैन्। त्यस्तै कंक्रिट सोच भएर होकी नेतृत्वहरुले मुहान सफा गर्नुपर्छ भन्ने आवाज कहिल्यै प्रवेश गरेनन्।
सिथि नखः का दिन पानीका मुहानको सामूहिक सरसफाइ गरिसकेपछि घरघरमा गएर परम्परागत नेवाः खानाहरू खाने चलन छ। आशा गरौ नेतृत्वको मुहान सफा भएपछि भोकमरीमा रहेका जनताले पेटभरी खान पाउने छन्।
किनकी नेतृत्व धमिलो हुँदा तिनका कार्यकर्तामात्र हैन, मुलुकको पर्यावरण नै धमिलो हुन्छ। यो बुझ्न तत्कालको लागि भर्खरै ढुंगा गिट्टी निकासी गर्ने सरकारी निर्णय हेरै नै काफी छ।
प्रकाशित: २ असार २०७८ १४:१७ बुधबार